WAAYIHII WARSAME Q27AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q27AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q27AAD
Abuu Haniya waxa uu la hadlay nin ay qaraabo yihiin oo Gaarisa deggan magiciisuna ahaa Ducaale kana codsaday in uu Warsame kaa caawiyo sidii uu Nairobi ku tagi lahaa.
Warsame lug iyo gacan ayaa dhaawac culusi uga yaallaa oo aad ayayna bararan yihiin oo faashad baa uga duuban sidaas darteed waxa uu halis ugu jiraa in ciidanka Kenya ee xudduudda jooga si sahlan uga shakiyaan kadib na xabsiga dhigaan ayaga oo ku eedaynaya argagixisanimo.
Abuu Haniya waxa uu Warsame faray in uu mar walba gashanaado surweel iyo shaati gacmo dheere ah xattaa habeenkii marka uu seexanayo inta uu Nairobi ka tagayo. Abuu Haniya waxa kale oo uu la xiriiray Shiikh Shucayb oo Nairobi jooga ahna ninka kooxda uga wakiilka ah magaalada Nairobi xagga abaabulka iyo lacag aruurinta waxa uu na faray in Warsame uu soo dhaweeyo isbitaalna geeyo.
Warsame gaari caasi ah (hoomey) ayuu Kismaayo ka raacay saacado kadibna xudduudka labada dal ayuu ka dhanka libooye ka tillaabay. Waxa uu raacay bas wayn. Darawalka baska ayaa Ducaale kala soo ballamay asaga ayaana askarta ilaaladda xudduudka Kenya soo dhaafiyay kadib laaluush uu siiyay. Galab casirliiq qorraxdu godka ku sii hoobanayso ayuu Warsame Gaarisa tagay horay ayaana guriga Ducaale laga geeyay.
Magaalada cabsi badan baa ka jirta oo Boliiska ayaa dadka Soomaalida ah waddooyinka ka qabqabanayay waxaa socday hawlgal culus oo soomaalida ka dhan gaar kuwa Soomaaliya ka yimid. Waxaa Boliisku xabsiga u taxaabayeen qof walba oo soomaali ah oo aan ku hadli karin afka Sawaaxiliga xattaa hadduu dhalashada Kenya haysto. Warsame labi maalmood ayuu Gaarisa joogay laakiin guriga kama uusan bixin cabsi Boliiska laga qabay darteed sidaas ayuu u la mid ahaa qof aan waligiis Gaarisa tagin oo kale kaliya waxa uu xasuustaa jidkii boorka badnaa ee aan laamigu saarnayn ee gaarigii guriga Ducaale u soo waday soo maray.
Miley goorsheegtadu ahayd saddexdii galabnimo gurigii Ducaale ee Warsame degganaa waxaa soo horistaagay gaari Cabdibile ah oo kuwa qaadka Gaarisa keena ah, waa mid ka mid ah baabuurta Ducaale ee qaadka ka shaqeeya. Shandaddiisi asaga oo gacanta ku sita ayuu Warsame shirka hore fariistay. Sababta Ducaale gaarigaan ugu dooray Warsame waa in uu ka nabadgalo Boliiska Kenya ee daadsan inta u dhaxaysa Gaarisa iyo Nairobi waayo gaarigaan iyo kuwa kale Ducaale ciidanku kuma saqajaamaan xoogaagooda ayaa loo tuuraa kadib na si halhaleel ah ayay birta uga wareejiyaan.
Wax saacad ka yar markii baabuurkii waddada saarnaa ayuu Warsame dareemay dabayl qabow iyo dhul cagaaran sidoo kale na jidkii rafka ahaa waxa uu isku beddalay laami haloosin ah calaamadaha iyo tilmaaha taraafiggu u dhammaystiran yihiin. Warsame la yaabban isbeddalka ayaa darawalkii waydiiyay sababta isbeddalka ugu wacan. Darawalkii waxa uu ugu jawaabay “Dhulkii hore waxa uu ahaa gobolka waqooyi bari haddana waxaan dhexjibaaxaynnaa gobolka bartamaha ee Kenya.” Warsame aya haddana waydiiyay maxaa labada gobol midna hora-umariyay midna dib-udhigay sow labadu ka ma mid aha dalka Kenya? Darawalkii waxa uu yiri “Kenya waa ay ogtahay in waqooyi bari uusan dhulkeeda ahayn sidaas darteed lacag isaga ma ay khasaarin”.
Tobankii habeennimo markii ay goorsheegtadu ku taagnayd gaarigii waxa uu foodda soo galiyay Nairobi. Laamiyada isdhaafaya, nalalka iyo daaraha cirka ku shareeran ee Nairobi ayuu Warsame ku indhadaraandaray. Warsame marnaba maxkadiisu ma aysan suuraysan in magaalo Afrikaan ahi sidaas u dhisan tahay waliba magaalo daris la ah Muqdishadii mugdiga ahayd ee meel walba burburka iyo boholaha miiran ahayd.
Warsame waxaa la geeyay Hotelka ku yaalla xaafadda soomaalida ee Islii halkaas uu markii waagu beryay ugu yimid Shiikh Shucayb. Shiikh Shucayb isla markiiba Warsame isbitaal ayuu geeyay isla maalintiina qalliin ayaa loo ballamiyay in uu berri u yimaado.
Toddobaad kadib Warsame isbitaalkii waa uu ka soo baxay waxa uu ma ku soo noqday isla hoteelkii uu ku soo degay. Waa hotel yar oo aad qiimo jaban nadaafaddiisu iska liidato.
Shiikh Shucayb waxa uu Warsame ku wargaliyay in loo baahan yahay in uu dalkii dib ugu noqdo si uu uga qaybqaato jihaadka looga soo horjeedo Itoobiyaanka iyo calooshood-u-shaqaystayaasha soomaalida ah. Warsame runtii inkasta oo uu fikirkii xagjirnimada ahaa si aad ah u dabaashay intii ciidanka maxkamadaha ku jiray haddana mar walba ka ma ay daadegi jirin in dawladda soomaalida lagu jihaado ama qof soomaali ah dilkiisa diintu bannaysay sidaas oo ay tahaay mar walba Warsame waxa ka go’nayd in uu safka hore uga jiro dagaalka Itoobiyaanka dalka looga xoraynayo waana ay ka go’nayd in uu dalkii dib ugu noqdo balse waxa uu go’aansaday in uu muddo lix bilood ah Nairobi ku negaado si uu afka Sawaaxiliga u barto. Sidaas darteed mar walba waxa uu Shiikh Shucayb ku oran jiray bisha dambe ayaan baxayaa.
Warsame waxa uu galay iskool afafka lagu barto si uu af Sawaaxiliga u barto. Ma jirin qaraabo iyo qof kale oo Warsame dhaqaalo ku taageerayay waxa uu isku debbarayay dhawrkii kun ee Abuu Haniya soo siiyay iyo in yar oo kale oo ka hartay lacagtii uu Gaalkacyo kala yimid oo Dahabshiil u taallay dhawr bilood kadib na waa isku dhammaatay sidaas awgeed waxa uu ku qasbanaaday in shaqo ka raadsado suuqa soomaalida Islii. Subax aroortii markii suuqa la furay ayuu bilaabay in uu dukaamada dharka iyo cuntooyinka hadba mid horistaago asaga oo shaqo waydiisanaya. Wax uu suuqa ku dhexwareegaba markii dambe waxa uu soo horistaagay dukaan wayn qalabka elektaroonigga lagu iibiyo. Waxaa dukaanka dhexfadhida maamo qiyaastii da’ kontonaad ah. Eeddo maxaan kaa iibiyaa? Ayay ku tiri. Maamo shaqodoon ayaan ahay ayuu ugu jawaabay. Eeddo shaqo noocee ah ayaad raadinaysaa maxaadse taqaannaa? Eeddo shaqo noocay doontaba ha noqotee waan rabaa, afka Ingiriisiga waan aqaan Sawaaxiliga hadda ayaan bartaa oo galabtii ayaan iskool aadaa. Okay eeddo, qof dukaanka iiga gado ayaan u baahnaa ee haddaad ka bixi kartid waan ku shaqaalaysiinayaa ee galabta ii imow marka suuqa la xiri rabo. Eeddo galabta iskool ayaan leeyahay. Oo haddaad galabtii iskool aaddid sidee iigu shaqaynaysaa anigu qof maalintii oo dhan dukaanka jooga ayaan u baahanaye? Warsame intuu xoogaa aamusay oo madaxa xogday ayuu yiri, eeddo iskoolka habeenkii ayaan u beddalayaa haddaad i shaqaalaysiisid. Haye goormaad ii imaanaysaa? Ayay waydiisay. Berri waa jimce ee sabtida subaxdii ama galabkii midkaas doontid ayaan kuu imaanayaa ayuu ugu jawaabay. Haye eeddo sabtida ii subixii iimow. Haye eeddo. Inta uusan dhaqaaqin ayay maamadii waydiisay eeddo magacaa? Maamo Warsame Faarax ayaa la i dhahaa, aniguna Caasho ayaan ahay.